Ajajni kun foddaa Saxaaxa Quunnamtii banuu, walitti dhufeenya gabateewwan kuusdeetaa hedduu moggaasuuf gargaara.
Asitti dirreewwan deetaa wal fakkataaniin gabateewwan adda addaa gara kuusdeetaa ammaan walitti hidhuu dandeessa. Sajoo Walquunnamtii Haaraajedhu cuqaasii walitti dhufeenya uumuuf, ykn salphumati harkisii-fi-dhiisi hantuutee fayyadamuun.
Faankishiniin kun kan argamu yoo ati walitti kuusdeetaa walitti dhufeenyaa walin hojjatta ta'ee dha.
Yoo foddaanSaxaaxa Quunnamtii baname,gabateewwan filaman haaromuu hin danda'ani.Kunis yeroo quunnamtiileen uumaman gabateewwan akka hin jijjiiramnee dha.
Gabatee siqsii hamamtaa isaa fooyyeessi
Akka fedhii keetitti gabateewwan hamamtaa isaanii jijjiiruu ni dandeessa.Gabateewwan siqsuuf, iddoo gara gubbaa barbaaddutti harkisi.Hanga gabateen hamamtaa barbaadde argattutti hamamtaa isaa hir'isi ykn guddisi hantuutee gara gubbaattii ykn cinaatti harkisi.
Dirreewwan deetaa hundi furtuu dursaa irratti irkatan foddaa gabatee keessatti kan adda bahan furtuu mallattoo xiqqoo dhaani.
Akka filmaataatti, sajoo Quunnamtii Haaraa jedhu cuqaasuun gara gubbaa dirree quunnamtii jiruu fi walquunnamtii gabateewwan lama gidduu qaaqa Quunnamtiilee jiru ibsa.
Sarara walqabsiistuu lama cuqaasuun, quunnamtiitti amaloota murtaa'an moggasuu dandeessa. Qaaqni Quunnamtiilee jedhu ni banama.